I-Lyza 's Loft self catering ilala abantu abayi-6 entabeni - I-Airbnb
I-Lyza 's Loft self catering ilala abantu abayi-6 entabeni
Igumbi lakho lokulala e i-loft sinombuki zindwendwe onguBronagh
Ibhodi yabakhenkethi ye-NI Ivunyiwe - Indawo entle yabakhweli beentaba/abahamba ngeenyawo kunye nabo bafuna ukuhlola iiNtaba ze-Mourne, i-Tollymore Forest Pk ikumgama wemizuzu eyi-10 kuphela xa behamba ngemoto, ilungele abo bafuna ukutyelela iindawo ze-Game of Thrones.
Ezinye iindawo zasekuhlaleni yi-Hilltown, i-Spelga Dam, i-Magic Road, i-Silent Valley, i-Castlewellan Forest Park, i- Peace Maze, i-Royal Co Down Golf Course kunye ne-Newcastle zonke eziphakathi kwemizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 ngemoto. I-Newry yi-20mins. Singamakhilomitha ayi-3 ukusuka eHilltown, eRathfriland naseKilcoo. Eyona nto iphakathi!
I-Lyza 's Loft ligumbi lokulala elikhulu elinekhitshi elahlukileyo kunye negumbi lemidlalo, elinetafile yokuqubha, elenzelwe wena kuphela kwaye akukho mntu. Kukho ibhedi elala abantu ababini enye neebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2 kwigumbi lokulala eliphambili kunye nesofa ekwayibhedi eyi-1 kwigumbi lemidlalo elenza i-Loft ifumaneke ukuze kulalwe abantu abayi-6.
Sihlala emaphandleni amahle, sibona kakuhle iintaba zaseMourne, kwidolophu ekuthiwa yiCabra. Indawo ithe cwaka apho usenokufumanisa ukuba abamelwane bakho abakufutshane ziigusha okanye iinkomo!! Iibhari neevenkile zokutyela zasekuhlaleni zikumgama weemayile eziyi-2 ukuya kweziyi-3. Iiteksi zinokulungiswa sithi ukuba kuyimfuneko.
Umbuki zindwendwe ngu- Bronagh
Ndinokusebenzisana kangangoko (okanye kungekhona) kangangokuba iindwendwe zingathanda. Unozakuzaku, umyeni kunye nabantwana abayi-2 (amantombazana) bahlala endlini. Iindwendwe zihlala kumgangatho ongasentla kwaye iindwendwe ziyakwazi ukungena kumnyango wangaphambili. Unemfihlo ngokupheleleyo xa ungena kumnyango wangaphambili njengoko kukho umnyango wangaphakathi otshixwayo kwindawo yethu yokuhlala engaphantsi. Siza kuhlala sisezantsi size sisebenzise umnyango ongasemva ngamaxesha onke. Siye saziswa kule ndawo ngoko nayiphi na imibuzo vele uyibuze. Siyakuvuyela ukukunika izikhokelo ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwaye senze ukuhlala kwakho kube yinto engalibalekiyo.
Ndinokusebenzisana kangangoko (okanye kungekhona) kangangokuba iindwendwe zingathanda. Unozakuzaku, umyeni kunye nabantwana abayi-2 (amantombazana) bahlala endlini. Iindwendwe zihl…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cabra